Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Down syndrome (2) ဒေါင်းန်-ဆင်ဒရုမ်း (၂)
Down syndrome (2) ဒေါင်းန်-ဆင်ဒရုမ်း (၂)
Tue, Jun 19, 2012 at 2:27 PM
ကျွန်မ အသက်က ၂၅ နှစ်၊ အိမ်ထောင်သည်ပါ။ ကျွန်မ အမျိုးသားရဲ့ မျိုးရိုးဟာ မသန်မစွမ်း (ဒေါင်း) ရောဂါ ရှိသူတွေပါ။ ကျွန်မ ကလေးယူခဲ့ရင် သူ့မျိုးရိုးများ လိုက်နိုင်မလား။ ဘာတွေများ စမ်းသပ် စစ်ဆေးရမလည်း၊ ဘယ်လိုများ ကာကွယ်ရမလည်းဆိုတာ အကြံဥာဏ်ပေးနိုင်မလားဆရာ။
Down syndrome (ဒေါင်း-ဆင်ဒရုမ်း) ဘယ်လိုလူတွေမှာ လာဖြစ်တတ်သလဲ
မိခင်လောင်း အသက် ကြီးလေလေ ဖြစ်နိုင်ခြေပိုလေလေ။ ၂၅ နှစ် အမျိုးသမီးတွေမှာ ၁၂၅ဝ ယောက်မှာ ၁ ယောက်၊ အသက် ၃ဝ တွေမှာ ၁ဝဝဝ ယောက်မှာ ၁ ယောက်၊ ၃၅ နှစ်ကျော်ရင် ၄ဝဝ မှာ ၁ ယောက်အထိပိုလာမယ်။ ၄ဝ ကျော်ရင် ၁ဝဝ မှာ ၁ ယောက် ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အများဆုံးဖြစ်တာက အသက် ၃၅ နှစ်အောက် မိခင်တွေကနေ ဖြစ်တယ်။ ဒါကလည်း ကလေးဖွါးဘို့ အကောင်းဆုံး အရွယ်တွေ ဖြစ်နေလို့ ဖြစ်မယ်။
(ဒေါင်း-ဆင်ဒရုမ်း) ကလေး တယောက် မွေးဘူးထားတဲ့ မိဘတွေကနေ အဲလိုကလေး ထပ်မွေးဘို့ အခွင့်အလမ်း ပိုများတယ်။ နောက်ပြီး (ခရိုမိုဇုမ်း) မူမမှန်တာ ရှိသူတွေမှာလဲ အခွင့်အလမ်း ပိုများတယ်။
ဘယ်ဆရာဝန်ကမှ (ဒေါင်း-ဆင်ဒရုမ်း) ဘာလို့ဖြစ်ရသလဲဆိုတာ အတိအကျ မပြောနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဘယ်လို ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာလဲ အတိအကျ ပြောမရပါ။
Prenatal Screening and Diagnosis မိဘတွေကို ဆေးစစ်တာတွေလုပ်သင့်တယ်။ (၂) နည်း သုံးတယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေကို စစ်တဲ့ Screening tests နဲ့ အထဲကကလေးမှာ ရှိနေတာသေခြာဘို့လုပ်တဲ့ Diagnostic tests တွေဖြစ်တယ်။ Diagnostic tests နည်းက ၉၉% သေခြာတယ်။ ခက်တာက ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတဲ့ သားအိမ်ထဲကို စမ်းရတာမို့ သတိထားရတယ်။ ဒါကြောင့် (၁) အသက် ၃၅ နှစ်ကျော်ပြီး၊ (၂) မိသားစုထဲမှာလဲ ရာဇဝင်ရှိသူ (၃) Screening test မှာ အပြစ်တွေ့သူ မိခင်လောင်းတွေကိုသာ ဒီနည်းကို လုပ်သင့်တယ်။
Screening tests စမ်းသပ်နည်းတွေ
1. Nuchal translucency testing နည်းကို ကိုယ်ဝန် ၁၁-၁၄ ပါတ်မှာလုပ်တယ်။ (အာလ်ထွာဆောင်း) သုံးပြီး အထဲက ကလးရဲ့ လည်ပင်းအရစ်မျာရှိတဲ့ (တစ်ရှူး) တွေကြားနေရာ အကျယ်ကိုတိုင်းတယ်။ ရောဂါရှိနေရင် ကျယ်တယ်။
2. Triple screen or Quadruple screen (Multiple marker test) နည်းကို ကိုယ်ဝန် ၁၅-၁၈ ပါတ်မှာလုပ်တယ်။ မိခင်ရဲ့သွေးကို စစ်တယ်။
3. Integrated screen နည်းကို ကိုယ်ဝန် ပဌမ ၃ လအတွင်းမှာလုပ်တယ်။ သွေးစစ်တာနဲ့ Nuchal translucency testing နည်းနဲ့ တွဲလုပ်ချင်လုပ်မယ်။ ဒုတိယ ၃ လထဲမှာ ၄ မျိုးတွဲလုပ်ရင် ပိုသေခြာမယ်။
4. Genetic ultrasound နည်းကို ကိုယ်ဝန် ၁၈-၂ဝ ပါတ်မှာလုပ်တယ်။ သွေးလဲစစ်မယ်။ ကလေးမှာ physical traits abnormalities ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မူမမှန်တာကြည့်မယ်။
Diagnostic tests သေခြာအောင်လုပ်တဲ့ စမ်းသပ်နည်းတွေ
1. Chorionic villus sampling (CVS) အချင်းအပိုင်းအစလေးကို ထုတ်ယူစစ်ဆေးတယ်။ ကိုယ်ဝန် ၁ဝ-၁၂ ပါတ်မှာ လုပ်တယ်။ Miscarriage ကိုယ်ဝန်ပျက်မှာကို စိုးရိမ်ရတယ်။
2. Amniocentesis ကိုယ်ဝန် ၁၅-၂ဝ ပါတ်မှာ လုပ်တယ်။ ရေမြွာရည်ကို ထုတ်ယူစစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်။ Chromosomal abnormalities (ခရိုမိုဇုမ်း) မူမမှန်တာရှာမယ်။ Amniocentesis နည်းကြောင့် Preterm labor ကလေးစောမွေးတာ နဲ့ Miscarriage ကိုယ်ဝန်ပျက်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တာကို သတိထားရတယ်။
3. Percutaneous umbilical blood sampling (PUBS) ကိုယ်ဝန် ၁၈ ပါတ်နောက်ပိုင်းမှာ လုပ်တယ်။ ချက်ကြိုးကနေ သွေးနမူနာယူပြီး စစ်ဆေးတယ်။
မွေးလာပြီး ကလေးကို ရောဂါရှိတာသေခြာချင်ရင် Physical characteristics ရုပ်ပိုင်းစစ်ဆေးတာနဲ့ Karyotype ဆိုတာ လုပ်တယ်။ သွေး နဲ့ (တစ်ရှူး) ကိုယူပြီး (ခရိုမိုဇုမ်း) ကိုစစ်ဆေးတယ်။